बिहिबार यी कार्य गर्नु हुदैन, अशुभ हुन्छ ! « Light Nepal
बिहिबार यी कार्य गर्नु हुदैन, अशुभ हुन्छ !
विहीबारको दिन लक्ष्मी नारायणको दिन मानिन्छ । यस दिन पुजा गर्दा लक्ष्मीको मात्र गर्नु हुँदैन ।
पुजा गर्दा लक्ष्मी नारायणको पुजासँगै गर्नु राम्रो हुन्छ । यसले पति पत्निबीचको सम्बन्ध पनि
राम्रो हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।